Iindalo zeNdalo (Cosmogonies) ezivela kwihlabathi lonke
Indalo yeengoma ezivela kwihlabathi lonke
Igama elithi "inkolelo yenkolelo" inokudideka kuba eli gama alichazi ukuba lithini. Indalo yendalo ibhekisela kumbumbi wendalo okanye ekudalweni koluntu kunye / okanye oothixo.
Uhlobo lwe-Myths yamaGrike , yi-GS Kirk, luhlula iimbali zezintlu zibe ziintandathu, kwaye ezintathu zazo ziza kuba yindalo. Iindidi zeengcali zendalo zi:
Iingcamango malunga nembali yokuqala yabantu
I-Cosmological, okanye 'Ukudala kweNdalo' yeengoma
Kule ngqaku, sigxininisa kakhulu kwi-original, i-cosmological myths (okanye i-cosmogonies, echazwa yiWebster ngokuthi "indalo yehlabathi okanye indawo yonke okanye inkolelo okanye i-akhawunti yendalo.")
Ukuze uthole ulwazi malunga nokudala abantu, funda ngo- Prometheus .
Umntu wokuqala: Yintoni ekho ekuqaleni
Akukho nanye ibali eliqhelekileyo malunga nexabiso lokuqala. Abadlali abakhulu bezinto eziphambili akusiyo isobho, kodwa i-Sky (uranus okanye i-Ouranos) kunye nohlobo lokungabi nalutho, okubhekiswa kuyo njenge-Void okanye i-Chaos. Ekubeni kungekho nto enye, yintoni ezayo emva koko kufuneka ivele kulezi zinto zokuqala okanye izinto zokuqala.
Akuzange kucaciswe ukungahambelani kwiChaos. Abanye bacinga ukuba i-Chaos idale imizimba ethile ye-cosmos; abanye, i-cosmos ngokwayo kunye nomyalelo. I-Chaos ichazwa ngokuba "yidokodo elimnyama, elithulileyo apho zonke izinto zavela khona."
Enye i-akhawunti yezinto eziqala ngayo yonke into ivela kwiThala leencwadi , ngokuqhelekileyo kuthiwa nguApollodorus, eliguqulelwe nguSir. JG Frazer. Ngubani na u-Apollodorus wayesalokhu engummangaliso, nangona mhlawumbi wayephila malunga nekhulu leminyaka ye-BC, okuyibeka ngakumbi kunathi kubalobi abakhulu abaye bajika kwiiGrike ukuze bafumane ulwazi lwezenkolo, uHomer noHesiod. Nanku (i-Pseudo-) i-Apollodorus 'version ye cosmogony:
Izulu (iUranos) yayingowokuqala owayelawula lonke ihlabathi. Kwaye uMdaka oMtshato (uGaia), wazala kuqala uMakhulu amakhulu ... Emva koko, uMhlaba wamzalela iCyclope .... Kodwa i-Sky ibophe kwaye iphoswe kwiTartarus .... Yaza wazala abantwana emhlabeni, u-Titans ... kunye nomncinci kunabo bonke, uCronus .... Kodwa uMhlaba, uhlungu ngenxa yokutshatyalaliswa kwabantwana bakhe, ababethelwe eTartarus ....
Okokuqala; ke uEros noMhlaba
Ingxelo yangaphambili (i-7-8 ye-BC) ingxelo (ebhekiswe ngasentla) ivela kuHesiod , umbhali we- Theogony kunye neMisebenzi kunye neentsuku . Kwi- Theogony I -Void okanye i-Chaos ikhona ngaphambi kokuba nantoni na enye. Emva koko kwafika umhlaba (Gaia) noEros (unkulunkulu wothando okanye umnqweno). Ngaphandle kweVeki okanye i-Chaos kwafika Ubumnyama (Erebus) nobusuku (Nyx); ukususela ngobusuku, ukukhanya kunye nosuku.
Umhlaba wavelisa i-Sky (uranus) ukuzifihla. Emva koko, ngokubambisana, bavelisa imithi enkulu, kuquka i-Oceanus (Ocean), i-Themis (uMthetho), i-Mnemosyne (iMemori), iPebebe, iCronus, i-Cyclopes / i-Cyclops (abavelisi bezithunywa zeTeus) kunye neentloko ezingama-50, uCottus , UBriareus, kunye noGyes (iiHecatoncheires).
Uranus Ufihla Abantwana Bakhe Ngomama wabo
Umzali ongokoqobo, Uranus wayenelungelo lokuthintela nabani na bakhe abantwana ukuba babone ukukhanya kwemini. Wayegxininisa ukuba uGaia (uMama weMhlaba) abagcine bevalelwe. Ukukhula ngaphakathi kwamathumbu kaMama, abantwana bakaUranus noGaia babangela ubuhlungu obukhulu ngokomzimba nangokomzwelo kuGaia. Ekugqibeleni, wayengawuthathi kwakhona kwaye ngoko wakha isinyithi esitsha. Ukususela kwisinyithi, uGaia wayenza igaleke, eyayinika inzala yakhe enesibindi, uTitan Cronus (uSaturn).
Bawagxotha uBawo u-Uranus
Ngexesha elilandelayo u-Uranus weza kuthanda uGaia, okwenzayo ngokusasaza emhlabeni wonke, uCronus wenyuka esuka kwindawo yakhe yokucasha, wagxotha umkhonto wakhe, wahlasela waza wayigxotha uyise u-Uranus. Inzala eyongezelelweyo iphuma egazini elichithileyo kunye nenxalenye ye-Uranus: IziGraants, i-Erinyes (amaFuries), uMeliae - kunye neyona nto ibonakalayo, u-Aphrodite, owazalelwa kwi-foam.
Ekuguquleleni kwakhe kwinqanaba elilandelayo le- Theogony , uNorman O. Brown uchaza i-etymology yegama elithi Titans kubantwana aba-12 bomhlaba kunye nezulu ( iCronus, iRhea, i-Iapetus, i-Oceanus, i- Hyperion, iThemis, iThea, i-Mnemosyne, i-Phoebe, iCeus , ITethys, kunye neCrius ):
UBawo Omkhulu uYibi wabiza abantwana bakhe i-Titans ngenxa yokunyaniseka kwabo; Uthe ukuba babenomfutho bomelele i-noose kwaye benza into enobungozi ekufuneka bahlawule ngayo ngexesha elizayo. (imigca 209-210)
... Kwaye kwafuneka bahlawule. Njengoko u-Uranus (i-Sky) wayehlupheke kwizandla zonyana wakhe, noCronus wayeya kuba sezandleni zenzalo yakhe, uZeus. Kodwa lelinye ibali kunye ne -Five Ages of Man-Intsomi yamaGrike kwiNdalo yoMntu
IiNtsomi zeNdalo zeSumerian
UChristopher Siren's Sumerian Mythology FAQ uchaza ukuba kwiingoma zeSumeriya kwakukho ulwandle oluphambili ( abzu ) apho umhlaba ( ki ) kunye nesibhakabhaka kwakhiwa. Phakathi kwezulu kunye nomhlaba kwakuyindawo yokugubungela. Ngayinye yale mimandla ihambelana nomnye wabo othixo,
Enki , Ninhursag , An , kunye ne- Enlil .
Iindaba zeNdalo zaseAsia
Iinkolelo zokudala zaseTshayina: uPan Gu wathatha isitshixo ukuze aphume ekugqithweni kwakhe kwiqanda le-cosmic. Xa efile waba ngumoya, iintaba, umhlaba kunye namanzi amaninzi.
I- Cosmogony yaseJapan ithi umhlaba kunye nezulu zadalwa kwiqanda likaThixo.
AmaHindu : Enye i-cosmogony evela kwingcinga.
ISikh: Ukudalwa kwayo yonke into ngumbutho onamandla onke.
Aztec; I-Coatlique yakhulelwa ngumkhwa we-obsididi apho yavelisa khona ityala elilodwa elisemthethweni lenyanga neenkwenkwezi. Xa wayekhulelwe, ngokudanisa, okwesibini, wazala unkulunkulu wemfazwe, u-Huitzilopochtli, owabulala abazalwana bakhe.
Inkolelo Yendalo YesiJalimane: Ekuqaleni kwakungenanto enkulu, iGinnungagap. Ummandla ovuthayo womlilo uqhutyelwa kumzantsi kunye nomoya ojikelezayo, ummandla ongasenyakatho. Bonke bavelisa iziganeko kunye neengxabano zazivelisa ubomi.
Ekuqaleni uThixo wadala izulu nomhlaba. Yaye umhlaba wawungenasimo, ungenanto; Nobumnyama [bebukho] ebusweni bobunzulu. Kwaye uMoya kaThixo wahamba phezu kwamanzi. Wathi uThixo, Makubakho ukukhanya; kwaba khona ukukhanya. UThixo wabona ukukhanya, ukuba kuhle; uThixo wahlula ukukhanya ebumnyameni. UThixo wabiza ukukhanya koMini, ubumnyama wabiza ubusuku. Kwaye kwangokuhlwa kwaye kusasa kwakuyimini yokuqala. Wathi uThixo, Makungabikho ndawo phakathi kwamanzi, mawahlule amanzi emanzini. UThixo wenza izulu, wahlula amanzi aphantsi kwezulu emanzini aphezu kwezulu; kwaye kwaba njalo.
Amadoda abalulekileyo eMbali yeSikh
I-Epiphany kunye neMbali yesiKhisimusi emithathu
Yintoni eyenza iChurch Baptist Baptist Church 'Primitive'?
Tao Te Ching - Ivesi 42
Indlela yokunyuka kweNtaba yeSherman
Indima yeGavana Jikelele weCanada
Izibonakaliso Zokukhanyisa Izibane Awufanele ugule
Funda Ukusebenzisa Ngokufanelekileyo IsiFrentshi Inkcazo 'Grâce à'
Yayiyiphi i-Alphabet yokuqala?
Yiyiphi i-Valve ye-EGR eyenzekayo kwaye xa kufuneka ihlaziywe
Ulwimi lweentyatyambo - iintyatyambo kunye neentsingiselo zabo
I-Atom Inkcazo kunye nemizekelo
Iimpawu Ungase Ube Ngezantsi kwiMandla oMbane
Yenza iDatazi usebenzisa "Iifayile" zeDelphi ezifakiwe
Yintoni iBhayi- bhile ebhekisela 'kwiidiliya zomsindo'?
Imibutho yoLuntu loMbutho
I-Chinese Mitten Crab
Abanqobileyo be-Sugar Bowl
I-Logic yeNkqubo yoQoqo
Isikhokelo kwii-Circles 9 zeGrey
I-Essay Sed Essay Prompts
I-Chemistry Izibhalo Ukuqala ngeNcwadi F
Inkcazo ye 'Tees Championship' okanye 'i-Back Tees' kwiKlasi yeGalofu
AmaHighters aphezulu kwiNcwadi